Vonona tanteraka hiaro ny voninahi-pirenena ny Barean’i Madagasikara. Nialoha ny fiaingana dia nozaraina tamin'ireo mpilalao ny “indemnités” rehetra azo avy amin'ireo minisitera maro nanampy, navoaka ho hitan’ny mason'ny rehetra ary avy eo notsinjaraina mitovy ho an'ny tsirairay. Ankoatra ny minisiteran’ny raharaham-bahiny nanome 5 tapitrisa Ariary, dia nanolotra 4 tapitrisa Ariary ny minisiteran’ny tontolo iainana, 4 tapitrisa avy amin’ny orinasa ETT, 2 tapitrisa avy amin’ny SMTP, 5 tapitrisa avy amin’ny Ocean Trade. Omaly dia efa nandeha ny lalao baolina kitra. Ho an’ny vondrona A ahitana an’i Maorisy, Madagasikara ary Seychelles dia nisaraka ady sahala 1-1 i Maorisy sy Seychelles. Rahampitso kosa no hifandona i Madagasikara sy Seychelles, izay inoana fa hotrongisin’ny Barea. Valin’ady kosa ny antsika rehefa hifandona amin’ny Maorisy satria izy ireo no nandavo antsika 3-1 tamin’ny fiadiana ny laharana faha-3 tamin’ny Lalaon’ny Nosy 2015. Ho an’ny vondrona B, dia nomontsanin’i La Réunion tamin’ny isa 4-0 i Maldives ary resin’i Mayotte 2-0 kosa i Kaomoro.